/Blog/Ithala/IFlibanserin ilinceda njani ibhinqa njengeHormone yesondo
ezaposwa ngomhla 11 / 11 / 2019 by 阿斯劳 bha liweyo Ithala.
Owona mbuzo uphambili, nangona kunjalo; Ingaba isebenza kanjani? Akukhange kufumaneke nto icacileyo kumatshini osetyenziswa leli liyeza ukuvelisa iziphumo. Nangona kunjalo, abaphandi beza nethiyori, kulandela inyani yokuba i-serotonin inoxanduva lokuthintela umsebenzi wesondo, kwaye bafumanise ukuba uFlibanserin (167933-07-5) kunciphisa umsebenzi we-serotonin kwingqondo. Oku, ukubuyisela, kubuyisela umnqweno wesini sowasetyhini. Kwakhona, iyeza linempembelelo engathanga ngqo kwi-norepinephrine kunye ne-dopamine, edibene neminqweno ephuculweyo yesondo.
Ukuba uyaphoswa Flibanserin idosi ngexesha lokulala, kuyacetyiswa ukuba ulinde kude kube lixesha lokulala elilandelayo ukulungiselela ichiza.
Ngokwezifundo ezininzi kunye nohlalutyo lwe-hoc, abasetyhini abasebenzisa eli chiza ukuba basebenzise uvavanyo esini Umnqweno wokuphazamiseka unokuhla emzimbeni. Masijongane nayo. Uninzi lwabafazi luyazi malunga nobunzima kwaye luyoyika ukusebenzisa nantoni na eya kuthi ichaphazele ubunzima bayo. Kukuziva ukomeleza ukwazi ukuba ukusebenzisa iFLIBASERIN akukho siphumo sokufumana ubunzima ebantwini, kodwa endaweni yoko, kuyabanceda baphalaze inani elibalulekileyo lobunzima. Ukuba ubusokoliswa ziingxaki zobunzima kwaye ujonge indlela engenamzamo yokuyichitha, eli yeza lidibanisa.
Iinkonzo zedijithali zeAmazon LLC -I-Kdp Shicilela thina, i-2018, i-Pink Viagra (Flibanserin): Isikhokelo seNcwadi kwiPilisi yokuPhucula iSini yaBasetyhini esiKhuthaza ukuqhuba ngesondo kunye nokunceda abaseTyhini bafezekise ii-Orgasm ezininzi, 1729471161
UBorsini F, uEvans K, uJason K, uRohde F, uAlexander B, uPollentier S (2002). "Ikhemesti ye-flibanserin". Ukuphononongwa kweziyobisi kwi-CNS. 8 (2): 117-42.